Ahoana no hampiofana alika | Tontolo alika
Ny alika dia mianatra mafana fo hatramin'ny fahazazany, ary inona koa, ny mpiompy sasany dia manomboka fiofanana fototra amin'ny alika kely alohan'ny dimy herinandro, ka mbola tsy tena aloha loatra ny manomboka mampiofana.
Azontsika atao ny manomboka amin'ny aloky ny zanak'alika amin'ny alàlan'ny fampianarana azy ny fahalalam-pomba manomboka amin'ny fotoana itondrantsika azy mody.. Ny fifandraisana rehetra ananantsika amin'ny alika kely dia fotoana iray ianarana Ary miaraka amin'ny torolàlana namana, dia hanampy anao hahalala ny lesona tena lehibe indrindra izahay, toy ny fiarahabana ireo namana vaovao nefa tsy hitsambikina, ny fomba hiandrasana mangina amin'ny sakafo hariva, ary izay hatao amin'ny nifin'alika.
1 Antony mahazatra amin'ny fampiofanana
2 Rahoviana no manomboka fiofanana
3 Fomba ekena amin'ny fianarana
4 Fitaovana ilaina amin'ny fampiofanana ny alikanay
5 Fanofanana poti
6 Rahoviana no hiantso matihanina
Antony mahazatra amin'ny fampiofanana
Ny fifandraisana amin'ny alika amin'ny fomba manenona ny fanao amin'ny fiainany andavanandro dia mametraka ny dingana ho an'ny fiofanana ho avy. Inona koa, mora kokoa ny manampy fitondran-tena tsara mankany amin'ny repertoire an'ny alika kely mba hampiofanana ny ratsy.
Ny antony mazava indrindra hampiofanana ny alikantsika dia ny fampiorenana ao aminy ny fitondran-tena tsara sy hisorohana ny fivoaran'ny hafa tsy mendrika, na izany aza, misy ny hafa antony maha-zava-dehibe ny fiarahana miasa amin'ny alika, toy ny:
Fahaiza-miaina: ny fampiofanana ny alika dia afaka manome antsika ho tompona sy biby fiompy a fiteny iraisana ary miaraka amin'izay dia mampianatra ny alika hitety ny tontolontsika isika.
Fahafahana: pasipaoro alika ho an'izao tontolo izao ny fiofanana. Ny alika voaofana tsara dia afaka mandeha amin'ny toerana maro, mihaona amin'ny olona maro ary manana traikefa an-tsehatra bebe kokoa satria manaraka ny lalàna izy.
Fiadanan-tsaina: rehefa voafehin'ny alika ny fiofanana dia tsy tokony hatahotra isika sao ho lany varavarana izy ary tsy hody any an-trano, na hisintona anay hidina amin'ny arabe mandra-paharary ny sorokay.
Famatorana: miasa amin'ny fanazaran-tena fanazaran-tena amin'ny ekipa dia manampy amin'ny fanamafisana ny fifandraisana amin'ilay sakaizantsika vaovao indrindra.
Fanatanjahan-tena ara-tsaina: mila miasa ny vatany sy ny ati-dohany ny alika. Na dia tsy mitaky ezaka ara-batana be aza ny lesona fanofanana fototra maro, ny lafiny ara-tsaina an'ny Ny famahana ny fanatanjahan-tena dia mety mandreraka na dia ny alika kely indrindra aza.
Rahoviana no manomboka fiofanana
Filankevitra nentim-paharazana soso-kevitra miandry mandra-pahatongan'ny alikakely alika vaksiny fenoSaingy takatra ankehitriny fa ny loza ateraky ny famoahana asa-tanana mandritra io vanim-potoana fampandrosoana lehibe io dia lehibe lavitra noho ny mety hisian'ny aretina mety hitranga.
Araka ny filazan'ny American Veterinary Society for Animal behaviour dia afaka ny alika kely manomboka kilasy fiaraha-miasa amin'ny fito ka hatramin'ny valo herinandro voalohany. Ny alika kely dia tokony hahazo farafahakeliny farafahakeliny fanaovana vaksiny farafahakeliny fito andro alohan'ny kilasy voalohany sy ny fanaingoana voalohany ary tsy maintsy tazomina hatrany amin'ny fanaovam-baksiny.
Fomba ekena amin'ny fianarana
Ny fianarana alika dia niova be tao anatin'ny 25 taona lasa ary fantatsika bebe kokoa ankehitriny ny fomba ianaran'ny alika sy ny fomba mahomby indrindra hanentanana azy ireo. Raha ny fiofanana momba ny alika taloha dia miankina amin'ny alfa amin'ny fifandraisana ary mitaky fitaovana toy ny collars fanitsiana na collars shock, ny science science dia mampiseho fa mahomby kokoa amin'ny fampiasana fiofanana manatanjaka tsara, izay fiofanana dia hetsika ataon'ny ekipa miaraka amin'ny andaniny sy ny ankilany mba hiasa hanatratra tanjona.
Fanamafisana tsara dia fomba fiasa naroson'ny fikambanana mahaolona, fikambanam-biby ary mpampiofana alika.
Ity karazana fiofanana ity dia mifantoka amin'izany valiny fitondran-tena tiana, manala ny valisoa amin'ny fitondran-tena tsy ilaina ary ny fanalavirana ny fampiasana sazy ara-batana na tahotra mba hiteraka fiovan'ny fitondran-tena.
El fanofanana clicker fomba mahafinaritra hampiasana ny herin'ny fanamafisana tsara izany. Ny clicker dia fitaovana kely izay manao feo tsara sy marika tsara rehefa nahavita ny hetsika marina ny alika, dia handoa valisoa amin'ny sakafo izany.
Raha vantany vao voafehin'ny alika ny fihetsika dia afaka mijanona tsy miankina amin'izy ireo ivelan'ny clicker izy ary aorian'izany dia tazomintsika izy mandra-pahatongan'ny fotoana hampianarana azy zavatra vaovao. Ny fanomanana clicker dia azo ampiasaina amin'ny zavatra rehetraManomboka amin'ny fampianarana anao ny fototra toy ny hipetraka, ny fampidinana ary ny fanatrarana, hatramin'ny fanovana ny fitondran-tena sarotra kokoa noho ny fanamby toy ny herisetra amin'ny leash.
Fitaovana ilaina amin'ny fampiofanana ny alikanay
Mba hanombohana mampiofana ny biby fiompinay dia mila manao izao manaraka izao izahay:
Vakana na kofehy: tsy maintsy misafidy vozon'akanjo na fehin-kibo izay tsy hikitrika na hifintina. Amin'izany ny alika dia tokony hahatsapa ho mahazo aina amin'ny volony.
Tady lava halavana: zava-dehibe ny safidintsika a fehy eo anelanelan'ny efatra sy enina metatra; izay mety ho fohy kokoa dia mety tsy hanome ilay alika efitrano ampy hahitana toerana sahaza ny rano, ary mety ho sarotra ny mandray azy.
Clicker: fitaovana fampiofanana izy io izay manao ny fizotran'ny fiofanana ho toy ny lalao.
Ny fiofanana amin'ny potty dia fihetsika azon'ny alika ianarana haingana, raha mbola arahi-maso ny alika kely, mifikitra amin'ny fandaharam-potoana manokana ary valio ihany koa ny valiny rehefa mahavita ny fiofanana tsara ianao.
Ny fanaraha-maso dia mitaky ny hijerentsika akaiky ny alika amin'ny fotoana rehetra mba hahafahantsika mamantatra ny famantarana mialoha ny vilany.
Zava-dehibe indrindra izany mampiasa boaty iray mety mandritra ny fotoana tsy ahafahantsika manara-maso mavitrika ny alika kely, ary koa amin'ny ora torimaso sy alohan'ny hatory.
Alaharo ny fiainan'ny alika kely dia hanampy anao haminavina mialoha ny andronao ary hahafahantsika manara-maso tsara kokoa ireo fanao amin'ny poti-nao izany. Ankoatry ny fandaharam-potoananao hisakafoanana, ny fotoana fatoriana, ny fotoana filalaovana ary mazava ho azy, ny dianao any ivelany.
Farany, tsy maintsy ataontsika izay hiarahantsika amin'ilay alika kely any ivelany isaky ny diany mankany amin'ny trano fidiovana. Raha miandry fotsiny isika mandra-pahatongany any an-trano, dia tsy hampifandray ny vilany sy ny fitsaboana azy ilay alika.
Rahoviana no hiantso matihanina
Ny fampiofanana dia tokony ho fahafinaretana ho antsika sy ny alika. Mazava ho azy, matetika misy ny fanamby rehefa miezaka manatsara ny fomba isikaFa raha tonga amin'ny fotoana mahasosotra antsika isika fa tsy mitombina ny fiofanana amin'ny biby fiompintsika dia tonga ny fotoana ahazoana vonjy.
Ny fahasosorana dia degre vitsivitsy monja amin'ny fahatezerana ary mety tsy handroso isika manandrana mampiofana ilay alika rehefa tezitra isika.
Tokony hanao izany koa isika hevero ny mitondra matihanina raha toa ny alikantsika mampiseho fihetsiketsehana mahatonga azy hitebiteby, toy ny mimonomonona na manaikitra, indrindra raha manan-janaka kely ao an-trano isika.
Azo antoka kokoa ny manomboka a fanovana fitondran-tena miaraka amina matihanina rehefa manomboka maneho fihetsiky ny olana ny alika fa tsy miandry azy ireo hihazona azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Training » Ahoana no mampiofana alika
Ny spikes sy ny alika